Health – Shwe Pann Thee
မတည့်တာကိုမှ စားချင်တယ် စားပြီးရင် တခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါလေးမှတ်ထားနော်မတည့်တာကိုမှ စားချင်တယ် စားပြီးရင် တခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါလေးမှတ်ထားနော်
မတည့်တာကိုမှ စားချင်တယ် စားပြီးရင် တခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါလေးမှတ်ထားနော် မတည့်တာကိုမှ စားချင်သူများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားနည်းများ ၁။ လက်ဖက်ကို အမြဲနိုင်တာ လျှက်ဆားဖြစ်ပါတယ်။ အစာမကြေ၊ လေပွ၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် မဖြစ်အောင် လက်ဖက်သုပ်စားပြီး ၁၅ ...
သွေးတိုးရှိလို့ ကြောက်နေရလား ….. ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေးသွေးတိုးရှိလို့ ကြောက်နေရလား ….. ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေး
သွေးတိုးရှိလို့ ကြောက်နေရလား ….. ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေး သွေးတိုးရောဂါများအတွက် ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ….လက်တွေ့ပျောက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်… သူကိုယ်သူ(သေ) စာရင်းသွင်းထားတဲ့လူကို ကျွန်တော်တွေ့လို့ဒီဆေးမြီးတိုလေးပေးခဲ့ပါတယ် လူနာကမရုံမှာကြောက်လို့ လူနာကိုမှာခဲ့သေးတယ်။ ဒီဆေးကိုနေ့စဉ်တလတိတိသေက်ဘို့နဲ့. အကယ်၍မပျောက်ခဲ့သော် ဆေးဘိုးကုန်ကျငွေများကို ကျွန်တော်မှပြန်လျော်ပေးမည့် ကတိလဲပေးခဲ့ပါတယ် နောက်တ.လအကြာမှာ ….. ...
ထုံကျင်နာအတွက် လေရှုနည်း – ဆရာကြီးဦးရန်အောင် (သြ/သု)ထုံကျင်နာအတွက် လေရှုနည်း – ဆရာကြီးဦးရန်အောင် (သြ/သု)
ထုံကျင်နာအတွက် လေရှုနည်း – ဆရာကြီးဦးရန်အောင် (သြ/သု) “ထုံကျင်နာအတွက် လေရှုနည်း” လက်တွေထုံတာ နှုတ်ခမ်းခြောက်တာ ခြေဖနောင့်ကွဲတာတွေဟာ အစွန်အဖျားကိုသွားတဲ့ ‘လေ’ အားနည်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ လေသန့်သန့်ကို ဝအောင်ရှုဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဒီလိုရောဂါတွေမဖြစ်လည်း လူတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ ...
တစ်ပြား တစ်ကျပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ပျောက်နည်းတစ်ပြား တစ်ကျပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ပျောက်နည်း
ကျောက်ကပ် ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ညစ် နေကြ သလား။ ငွေတစ်ပြား တစ်ကျပ်မှ မကုန် စေရဘဲ ပျောက်ကင်း စေရမယ်။ စိတ်ချ လက်ချနဲ့ ယုံယုံ ကြည်ကြည် သောက်ကြည့် လိုက်စမ်းပါ။ ပြောင်းဖူးက ထွက်တဲ့ ...
ရုတ်တရက် သေဆုံးနိုင်သော သတိထားစရာ အမှတ်တမဲ့အန္တရာယ်ရုတ်တရက် သေဆုံးနိုင်သော သတိထားစရာ အမှတ်တမဲ့အန္တရာယ်
ရုတ်တရက် သေဆုံးနိုင်သော သတိထားစရာ အမှတ်တမဲ့အန္တရာယ် ရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရပ်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှု့ရပ် ကာ ဦးနှောက်သို့သွေးမရောက်လျင် လူသည်၅ မိနစ်အတွင်းသေစေနိုင်သည်ကို သိ ပြီးသူများ ပါသည် ။ နှလုံးခုန်မရပ်ပဲ ဦးနှောက်မှာ သွေးကြောပိတ်ကာသေဆုံးဖူးသူတွေရှိပါသည် အက်စီးဒင့်မဟုတ်ပဲအမှတ်တမဲ့ဖြစ်တတ်သော ကိစ္စမို့အများကသတိမထားမိကြပါ ။ ...
လေဖြတ်တော့မယ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်က သတိပေးနေတဲ့ လက္ခဏာများလေဖြတ်တော့မယ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်က သတိပေးနေတဲ့ လက္ခဏာများ
လေဖြတ်တော့မယ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်က သတိပေးနေတဲ့ လက္ခဏာများ လေဖြတ်တော့မယ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်က အချက်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ကြိုသိထားခြင်းက အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လေဖြတ်လေငန်းရောဂါဆိုတာ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရောဂါပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မလှုပ်နိုင်တော့လို့ ချေးပါ၊ သေးပေါက်ကအစ အိမ်သားတွေကို အားကိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ...
ဗိုက်ဘာလို့ ပူတာလဲ၊ ပူတဲ့ဗိုက်ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲဗိုက်ဘာလို့ ပူတာလဲ၊ ပူတဲ့ဗိုက်ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ
လူအများစုရဲ့အထင်က ဗိုက်ပူတာဟာ ဝမ်းဗိုက်မှာအဆီတွေ စုပါများပြီး အဆီတွေအခေါက်တွေ ထူလာလို့ဖြစ်ရတာလို့ပဲ ထင်နေကြပါတယ်။ အဲဒါတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေ သတိမထားမိကြသေးတဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အူမကြီးတွေ ကြီးမားတုတ်ခိုင်လွန်း နေလို့ ဗိုက်ပူထွက်နေကြရခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ...
နှစ်နဲ့ချီပြီး ဆေးသောက်လာရတဲ့ သွားရောဂါ နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားတဲ့နည်းနှစ်နဲ့ချီပြီး ဆေးသောက်လာရတဲ့ သွားရောဂါ နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားတဲ့နည်း
ကြိုတင်ဝန်ခံပါရစေ။ ကျုပ်က ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။ ဝေတနာရှင်ဗျ။ ဒီလိုဗျ••၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကျုပ်အံသွားတစ်ချောင်းလှုတ်ပြီး မခံမရပ်ကိုက်လွန်းလို့ ဆရာဝန်သွားပြတယ် ဆရာဝန်ကသွားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတော့ မနုတ်စေချင်ဘူး စားဆေးပေးပြီးထိန်းလိုက်တယ်။သက်သာသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားရဲ့ဘေးမှာဖုကလေးလိုဖြစ်ပြီးပြီတည်လာတယ်။ဆရာဝန်ထပ်ပြ ဆေးထပ်ပေး ဒီလိုနဲ့ပဲသံသရာလည်နေတာပေါ့။ ပြီတည်တဲ့အခါ သွားဖုံးတင်းပြီး နေထိုင်ရခက်ပေမယ့်ညှစ်ထုတ်လိုက်လို့ပြီထွက်သွားရင် တစ်ပါတ်လောက်နေထိုင်လို့ကောင်းသွားပြန်ရော။ ...
ငွေမကုန်ပဲ အသည်းဆေးနိုင်သည့် တိုင်းရင်းဆေးနည်းငွေမကုန်ပဲ အသည်းဆေးနိုင်သည့် တိုင်းရင်းဆေးနည်း
ငွေမကုန်ပဲ အသည်းဆေးနိုင်သည့် တိုင်းရင်းဆေးနည်း တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် အဆိပ်အပုပ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အရအခုအပတ်မှာ အလှည့်ကျတာကတော့အသည်းကိုဆေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာအသည်းဟာအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်သလိုအလုပ်အများဆုံးသောကလီစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စားအမျှအစာတွေကအဆိပ်တွေကိုဖြေပေးရပါတယ်။ နေ့စဉ်စားနေတဲ့အစာတွေထဲမှာအဆိပ်တွေကအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်အသည်းကောင်းဖို့သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။အသည်းကိုဆေးဖို့အကောင်းဆုံးကတော့မန်ကျည်းဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးဟာအသည်းအတွက်သဘာဝကပေးထားတဲ့ဆေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသည်းကိုနုပျိုစေပါတယ်။အသည်းခြောက်ခြင်း၊ကျုံ့ခြင်း၊ကြွပ်ခြင်း၊ ဆတ်ခြင်း၊ပုပ်ခြင်းတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အခုခေတ်မှာBပိုးCပိုးHပိုးစသြည်ဖင့်ဖြစ်ကြတာဟာအသည်းပုပ်လို့ပါ။ပိုးဆိုတာပုပ်မှတွယ်တာပါ။ မပုပ်ရင်မတွယ်ပါဘူး။အဲ့လိုပိုးမတွယ်အောင်အသည်းကိုဆေးကြောပေးဖို့လိုပါတယ်။ရိုးရိုးလေးပါပဲ၊မန်ကျည်းဖျော်ရည်သောက်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနျကညြျးမှညျ့လကျတစျဆုပျ၊ထနျးလြြှကျသငျ့ရုံ၊ဆားအနညျးငယျကိုမတျခှကျထဲမှာထညျ့ပွီးရနှေေးဆူကိုလောငျးထညျ့ပါ။ မနက်ထဲကနှပ်ထ ားရင်ညနေဆိုသောက်လို့ရပါပြီ။ဆန်ကာနဲ့စစ ်လိုက်ရင်အရသာရှိတဲ့မန်ကျည်းဖျော်ရည်ကိုရပြီပေါ့။ သံပရာသီးကြိုက်ရင်ညှစ်ထည့်၊အေးအေးလေးသောက်ချင်ရင်ရေခဲထည့်သောက်ပါ။ အသည်းကအဆိပ်အပုပ်တွေသာမကဝမ်းဗိုက်ထဲကအပူအပုပ်တွေလည်းထွက်သွားပြီးလူကပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဆိပ်အပုပ်အပူအစပ်တွေကင်း ရှင်းသွားတော့သွေးသားသန့်စင်ပြီးအလှတွေလည်းတိုးပြီပေါ့။ ချစ်ခင်လေးစားလျှက်.……. ...
ကော်ဖီ နဲ့ အမြန်စာတွေ တွဲမစားနဲ့ကော်ဖီ နဲ့ အမြန်စာတွေ တွဲမစားနဲ့
ကော်ဖီ နဲ့ အမြန်စာတွေ တွဲမစားနဲ့ ကော်ဖီ နဲ့ အမြန်စာတွေ တွဲမစားနဲ့ ဆီကြော်စာများ၊ အထူးသဖြင့် Fast food လို့ခေါ်တဲ့ အသင့်စားနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ အမြန်စာအမျိုးမျိုးကို ကော်ဖီနှင့် အတူတွဲ၍မစားသင့်ဘူးလို့ လေ့လာချက်တစ်ခုက ထုတ်ပြန်လိုက် ...